Ciidamada ammaanka Puntland oo gacanta ku dhigay Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab | Allbalcad Online
Home WARARKA Ciidamada ammaanka Puntland oo gacanta ku dhigay Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamada ammaanka Puntland oo gacanta ku dhigay Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab
Ciidanka ammaanka ee Puntland ayaa wali daba socda soo qabashada maleeshiyadii xalay weerartay jeelka wayn ee Boosaaso.
Argagixisada Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaysa magaalada hareeraheeda ayaa ciidamada dufaaca ku guuleystay soo qabashada qaar ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ee xalay weerarka xabsiga ka dambeysay.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, oo galabta gaaray magaaladda Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari, ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada qalabka sida.
“Madaxweynaha Safarkiisa waa mid shaqo, wuxuuna la xiriira u kuurgelidda xaaladda amni ee magaalada iyo guud ahaan Gobolka, isagoo kulamo la qaadanaya saraakiisha Amniga iyo mas’uuliyiinta kale ee Gobolka Bari”.ayaa lagu yiri qoraal looga hadlayay socdaalka Madaxweyne Puntland.
Previous articleDowladda oo sheegtay in ay ogoshahay banaanbax nabadeed oo ay ammaankiisa sugeyso
Next articleDEG-DEG Qarax xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho